Tratran’ny AVC tampoka… : halefa hotsaboina maika atsy Maorisy ny Pr Zafy | NewsMada
Tratran’ny AVC tampoka… : halefa hotsaboina maika atsy Maorisy ny Pr Zafy
Par Taratra sur 12/10/2017
Tratry ny fahatsetsenan’ny lalandra tampoka (AVC), omaly, ny filoha teo aloha, Zafy Albert. Nentina avy hatrany tetsy amin’ny hopitaly Befelatanana ity profesora momba ny fitsaboana ity taorian’izany. Araka ny vaovao farany, tsy maintsy halefa hotsaboina any ivelany ny tenany.
Tsy azo hihodivirana ny mety handefasana azy hotsaboina any ivelany (Evasan). Tsy mahatsiaro tena ny tenany, hatramin’ny fotoana nanoratana, omaly. Voalaza fa ao anatin’ilay antsoina hoe : “état comateux avec un Glasgow 9-10“, raha ny fanazavana ara-teknika. Noraisin’ny teny amin’ny hopitaly Befelatanana ny Pr Zafy, ny antoandro ary nafindra avy hatrany eny amin’ny “Polyclinique Ilafy” ny harivan’iny. “Efa mikarakara ny pasipaoro sy ny taratasin’ny filoha Zafy Albert ny tompon’andraikitra rehetra izao… Tena tampoka be ilay krizy nahazo azy”, hoy ny teny fohy nataon’ny olona akaiky azy, Tabera Randriamanantsoa, omaly. Nambarany fa mbola hihaona amin’ny mpanao gazety izy ireo mialoha ny faran’ny herinandro izao, hilazana ny fivoaran’ny toe-pahasalaman’ity tompon-kevitra amin’ny fampihavanam-pirenena ity.
Nandray ny filoha teo aloha, Ravalomanana
Tsiahivina fa vao tapa-bolana teo ho eo izao, ny nandraisany ny filoha teo aloha, Ravalomanana teny amin’ny trano fonenany, eny Ivandry. Tsy nisy nipika ny dinika saingy, tombanana fa anisan’ny nodinihin’ny roa tonta ny momba ny fampihavanam-pirenena amin’izao fitsanganan’ny CFM izao. Eo koa ny fikasan’ny mpitondra hanitsy lalàmpanorenana ary koa ny fiainam-pirenena ankapobeny.
Mpanao politika feno sy olom-panjakana
Anisan’ireo mpanao politika zokiny indrindra raha mitaha amin’ny amiraly Ratsiraka sy ry Rakotonirina Manandafy izy. Feno 90 taona katroka ny tenany amin’izao fotoana izao. Mpanao politika sy olom-panjakana feno tanteraka. Teraka ny 1 mey ny taona 1927 tany Ambilobe. Filoham-pirenena teo anelanelan’ny taona 1993 hatramin’ny taona 1996. Nialoha izany, efa minisitry ny Fahasalamana sy ny raharaha sosialy fony fitondran’ny governemantan’ny Jly Ramanantsoa Gabriel, ny taona 1972 hatramin’ny taona 1975. Araka izany, andrasana ny ho fivoaran’ny toe-pahasalaman’ity “Rain’ny demokrasia” ity.